Soosaarayaasha iyo Badeecada Soosaarayaasha Shiinaha iyo Soosaarayaasha | Double Rings
Nidaamka 'autoclave Double Rings' wuxuu soosaaray faa'iidoyinka badeecado shisheeye oo la mid ah horumarka. Qaybaha autoclave ee cadaadiska weyn ee falanqaynta cunsuriyada iyo tijaabooyinka kala duwan ee walbahaarka, waxay hagaajiyeen xisaabinta xoogga.
Codsiga: Dhismaha Flyash ， Qalabka Dhismaha, Dhirta AAC,
Autoclave-Caan-caan ah oo loo adeegsaday Pla Plant, Plant Flyash, Dhismaha Qalabka iwm ..
1, wax soosaarkii ugu horreeyay ee maxalliga ah ee warshad xirfadeedka autoclave
2, soosaarka xariijinta iskuxirka, alxanka dhammaan otomaatiga, tayada iyo xasilloonida.
3, dhamaan qaybaha cadaadiska 100% sawirka sawirka raajada, hababka ogaanshaha horumarsan.
4, sheyga sida warshad dhan, horumarsan iyo qaab macquul ah, mudo rakibo oo gaaban, kharashka maalgashiga ayaa hooseeya.
5, oo si buuxda u qalabaysan, gacanta ama gacanta kombiyuutarka.
Qalabka lagu daaweyn karo ee loo yaqaan 'Autoclave' qalabka lagu daweeyo uumiga weyn, waxaa loo isticmaali karaa lebenka ciidda lagu buufiyo ee kuleylka ah, duulista ashshka, baloogyada la taaban karo ee la taaban karo, guluubka la taaban karo ee sareeya, tuubbada iyo waxyaabaha kale ee la taaban karo, laakiin sidoo kale alwaaxa, daawada, warshadaha kiimikada, galaaska, qalabka korantada iyo warshadaha kale.
MoodelShayga FGZCS1.0-1.65x21 FGZCS1.3-2x21 FGZCS1.3-2x22 FGZCS1.3-2x26 FGZCS1.3-2x27.5 FGZCS1.3-2x30
Dhererka Waxtarka leh mm
Naqshadeynta Cadaadiska Mpa
Heerkulka naqshadeynta ℃
Heerkulka Shaqeynta ℃
Steam Saturated, biyo cufan
Gudaha Masaafada Tareenka mm
Mugga wax ku oolka ah m3
Miisaanka Guud Kg
Guud ahaan Cabbir mm
MoodelShayga FGZCS1.5-2.68x22.5 FGZCS1.5-2.68x26 FGZCS1.5-2.68x39 FGZCS1.5-2.85x21 FGZCS1.5-2.85x23
MoodelShayga FGZCS1.5-2.85x24 FGZCS1.5-2.85x25 FGZCS1.5-2.85x26 FGZCS1.5-2.85x26.5 FGZCS1.5-2.85x27
MoodelShayga FGZCS1.5-2.85x29 FGZCS1.5-2.85x36 FGZCS1.5-3x23 FGZCS1.5-3x31 FGZCS1.5-3.2x24.5
Miisaanka Guud Kg 58400
Guud ahaan Cabbir mm 30634x3640x4495 37634x3462x4495 24875x3516x4804 32875x3516x4804 26570x3750x5027
Hore: AAC Autoclave iyo Boiler
Xiga: SZS Dhuxul Shuban Biyo Kulul Biyo kulul
heerkulka jeermiska ee autoclave
fasalka b autoclave
SZS Gas Oil PLG Kuleeliyaha
Hordhac: jirka kululeeyaha taxanaha ah ee 'SZS' waa dherer dhererkiisu yahay 2-durbaan, qaabka nooca qiiqa dabka. Foornadu waxay ku taal dhinaca midig tubbada bangiga wax lagu kala bixiyaana waxay ku taal dhinaca bidix. Jirka waxaa lagu xardhay buugga jirka iyadoo la adeegsanayo taageerooyinka dabacsan ee dhexda iyo labada daraf ee durbaanka hoose, wuxuu badbaadin karaa jirka oo dhan inuu ku fidiyo dhinac dhinac. Foornada ku wareegsan waxaa ku yaal gidaarka dhuuban xuub xuub cufan. Waxaa gebi ahaanba xiran oo u dhexeeya darbiga xuubka on foornada dhinaca bidix iyo c ...